क्षतिपूर्ति - विकिपिडिया
क्षतिपूर्ति कुनै अन्य व्यक्तिका व्यवहारले जब कुनैलाई केही हानि पुग्दछ तब त्यसमा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यो जान्ने हुन्छ कि यसको उपचार के हुनेछ? विधिको यो अन्तर्निहित कर्तव्य छ कि त्यो हानिको पूर्ति गरियोस्। यस पूर्तिका धेरै रीतिहरु छन्। एक त यो कि हानि उठाउनेलाई केही मुद्राहरु दिएर क्षतिपूर्ति गरिन्छ। अत: क्षतिपूर्ति त्यो वस्तु हो जसदेखि प्रतिवादीका कर्तव्योल्लंघनदेखि भएको हानिको पूर्ति त्यसको नैं द्वारा वादीलाई दिए जानवाली एक निश्चित धनराशि ले गरिंदै जान सकियोस्।
यस क्षतिपूर्तिका दुइ समस्याहरु छन्। पहिलो यो कि वादीको उक्त क्षतिको परिधि कति छ जसका लागि प्रतिवादीलाई उत्तरदायी ठहराइएको छ। अर्को यो कि पूरणीय क्षतिको सीमा निश्चित हुनमा पनि रुपहरूमा त्यसको मूल्य कसरी तोक्ने। दुइटै नैं कुराहरु एक सुव्यवस्थित विचारको अपेक्षा राख्दछन्। यी समस्याहरुदेखि सम्बद्ध केही आधारभूत नियम छ
पहिलो यो कि ‘मानवीय दुष्कृत्य आफ्नो हुने प्रभावहरुसम्म नैं सीमित रहदैंन। बहुधा कार्यकारणको एक शृङ्खला हुन्छ जो त्यसको दुष्परिणामहरूको दूरस्थ दिशाहरुसम्म गइहाल्छ’। ‘एक जहाज यदि कुनै अर्का जहाजदेखि टकरा जाए त जहाजको स्वामी दिवालिया हो नैं जानेछ, पछिलाई त्यसका परिवार पनि शिक्षा एवं अवसरहरुका अभावदेखि पीडित हुन सक्छ’। नैतिक सदाचार एवं सुनागरिकताको दृष्टिले त दोषीलाई वादीको उक्त हानिदेखि उत्पन्न सबै प्रकारका अभावहरुका लागि उत्तरदायी ठहराइनु पर्दछ। हामी प्रतिवादी द्वारा गरिएको अपराधका परिणामहरूलाई कुनै निश्चित अंशसम्म पुग्न सक्तैनन्। परिणामहरूको त अन्त छैन, परन्तु अपेक्षित कर्तव्यहरूको एक अन्त अवश्य छ। विधि यसै अपेक्षित कर्तव्यको व्यवहार्य एवं सुसंगत सीमाहरु तय गर्नु आवश्यक बुझ्दछ। ‘छडली बनाम बैक्सहरुडल’ भएका मुकदमाका नियम लागू हुन्छन्। यिनको अनुसार केवल तिनै क्षतिहरूको पूर्ति हुनुपर्छ जो वा त स्वभवत: उत्पन्न छन् (अर्थात्‌ त्यस समझौतेका उल्लंघनदेखि हुने स्वाभाविक व्यापारहरूको उपज छन्) वा जसको विषयमा तर्कसंगत उपायहरूबाट यो बुझियो कि उभय पक्षले सम्झौता गर्दै समय नैं त्यसको उल्लंघनदेखि उत्पन्न, यी परिणामहरूको कल्पना गरेको थियो।
हानि विषयक विधि (ला अव टार्ट्‌स)मा ‘ग्रीन ल्यान्ड बनाम चैप्लिन’ भएका मामलेमा बताइएको छ कि प्रतिवादीदेखि केवल उनै क्षतिपूर्तिहरूको अपेक्षा गर्न सक्छ जसको पूर्वकल्पना कुनै सामान्यत: बुद्धिमान समझा जाने व्यक्ति गर्न सकता छ। परन्तु भविष्यदर्शिताको यस कसौटीलाई ‘स्मिथ बनाम लण्डन ऐंड साउथ वेस्टर्न रेलौं कं.’ भएका मामलाका निप्टाउनमा अपनाइएन। यसमा तय भएको थियो कि असावधानी (नेग्लिजेन्स)को स्थितिमा दोषी सबै प्रकारका परिणामहरुका लागि उत्तरदायी छ; चाहे तिनलाई त्यसले पहिलादेखि सोचमा राखेका छन् अथवा छैन। असावधानी सिद्ध भएपछि यस आपत्तिको सम्भव छैन रह जातीको क्षतिपूर्तिको मांग आशा भन्दा अधिक छ। यो नियम ‘इन रे पोलेमिस फर्नेस विदी एंड कं.’ भएका मामलेमा स्थिर भयो। प्रतिवादीका नौकर जहाजदेखि माल उतार रहोस् थिए। एकले शहतीरका एक तख्तेलाई ठोकर मारी र त्यो तख्ता जहाजका पेट्राल -वाष्प (पेट्रोल वेयर बाट) रगड खाता तलतर्फ गए यस क्रियादेखि त्यसमा आगो लग गई र यो आगो केही देरमा पूरा जहाजमा फैल गई। जहाजका मालिकले पूरा जहाजको क्षतिपूर्तिको दावा गरे। बचावमा प्रतिवादीको कहना थियो कि त्यसलाई इतने ठूला दुष्परिणामको कल्पना न थियो परन्तु यो उपकरण स्वीकार छैन कि गई। कुनै पनि क्रियामा असावधानी सिद्ध हो जानेका पश्चात्‌ प्रतिवाद ती सबै परिणामको उत्तरदायी हुनेछ जसको सम्बन्ध सीधै तौरमा उक्त कार्यदेखि जोडियो जा सक्छ।
अर्को समस्या छ क्षतिपूर्तिका स्वरूप एवं सीमाको निर्धारित गर्न दिनेका पछि त्यसका मूल्य रुपहरूमा कूतने गरे क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन लिखे नियमहरु द्वारा हुन्छ:
पहिलो यो कि शर्तबंध समझौतेको विधिमा क्षतिपूर्तिको आधारभूत उद्देश्य हुन्छ-हानि सहने पक्षलाई उपयुक्त धनराशि दिलाउनएर त्यसै स्थितिमा ले आना जस मा त्यो सम्झौता भंग हुनको बदलामा त्यसको पूर्ति हो जाने दशामा पुग पाता।हरू क्षतिपूर्ति वादी द्वारा झेले जाने नुकसानलाई भरनका लागि नैं हुन्छ, न कि त्यस उल्लंघनेर्तालाई सजा दिनेका लिए। हानिविषयक विधिमा पनि नियम त यसै आपूर्तिको नैं छ, परन्तु यसमा क्षति गरिए ढगमा क्षतिपूर्तिको परिणाम बढाया घटाया जा सक्छ। जहाँ क्षति जान बूझकर अथवा द्वेषवश पहँुचाई जान्छ वहाँ न्यायालय वादीको क्षतिको आपूर्ति यथोचित धनदेखि पनि अधिक दिएर गर्न सक्छ। यस प्रकारको क्षतिपूर्तिहरु आदर्श अथवा दंडात्मक समझी जान्छ। दंडात्मक क्षतिपूतिहरूको उद्देश्य एकतर्फ त प्रतिवादीलाई दंड दिनु छ, अर्को पटि अभावग्रस्त वादीलाई अनुप्राणीत गर्नु पनि छ। जहाँ क्षति अज्ञानवश पुगाई गई छ अथवा वादी त्यस्तो भोगदंडका उपयुक्त छ, त्यसलाई धेरै सानो रकमदेखि क्षतिपूर्ति गर्नलाई भनिन्छ। यी मानभंजक क्षतिपूर्तिहरु मानी गई छ। यी वादीका कार्यका विरूद्ध न्यायालयको बेरुखी प्रकट गर्दछ।
अर्को यो कि चूँकि प्रतिज्ञानबद्ध समझौ्दै (कंट्रैक्ट) र विक्षति (रर्ट) दुइटै नैं मामलहरूमा अन्तर्निहित उद्देश्य अभावपूर्तिको नैं हुन्छ एक यो नियम आफ्नो आज नि:सृत हुन्छ कि यदि वादीले हानि छैन उठाई छ भनेंत्यो कुनै क्षतिपूर्तिको पनि दावेदार छैन। परन्तु वादीका वैध अधिकारहरुका अतिक्रमणको अवस्थामा न्यायालय एक सानो रकमको क्षतिपूर्ति त्यसलाई दिलाउन सक्छ। यी नाम्ना क्षतिपूर्तिहरु छन् जो वस्तुत: रकम कहीं जाने योग्य त हुन्छन् परन्तु परिमाणको दृष्टिले तिनको कुनै खास अस्तित्व हुँदैन। ‘ऐशबी बनाम ह्वाइट’को मामला यसको उदाहरण छ। वादी संशताव्दीय चुनावमा मतदान्थ्यो। चुनाव-अधिकारीदेखि त्यसलाई आफ्नो मत दिनुले रोका। वादीले त्यसमा आफ्नो वैध अधिकारका हननको दावा गरे। प्रतिवादीले बचावमा यो तर्क उपस्थित गरे कि वादीलाई त्यो भन्दा कुनै वित्तीय क्षति भएको होइन। परन्तु न्यायालयले भने प्रत्येक हानि आफ्नो क्षतिपूर्ति लेती नैं छ, भलहरु नैं त्यस पक्षको एक कौडी पनि हानि न भएको छ। क्षतिपूर्ति केवल दंडात्मक नैं हुँदैन। हानि आफ्नो क्षतिपूर्ति त्यस दशामा पनि लिन्छ जब कुनै अधिकारक्षेत्रमा कुनै बाधा हुन्छ। जस्तै, गलत प्रचारमा कहे गए शब्दहरु द्वारा कुनैलाई पनि, कमभन्दा कम, मात्र कहे जाने शब्दहरुदेखि कुनै आर्थिक हानि हुँदैन तर त्यसमा कार्रवाई गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिले यदि कुनै अन्यको कनपटीमा एक मुक्का मारा त यसबाट पीडित व्यक्तिको केही पनि व्यय भएन, परन्तु एतदर्थ त्यसमा कार्रवाई हुन सक्छ। कुनै अर्काको भूमिमा सवारी ले जाना हानि न हुँदै पनि त्यसको संपत्तिमा आक्रमण मान्न सकिन्छ।
तेस्रो यो कि समझौ्दै एवं विक्षति, दुइटै नैं मामलहरूमा वादीको गर्त्तव्य क्षतिको शमन गर्नका लागि आवश्यक कदम उठाना हुन जान्छ। उदाहरणार्थ, प्रतिवादीले सम्झौता भंग गर्दै यदि वादीका मालको आफ्नो जहाजमा लादनाले यिनकोर गरिदिए त यो वादीको गर्त्तव्य छ कि, उपलब्ध छ सके तो, त्यो कुनै अर्का जहाजमा सामान लदवा दे। यदि त्यसले यसमा असावधानी देखिलाई र अकस्मात्‌ तूफान आ जानाले डाकयार्डमा पडा पडा सामान नष्ट भयो त प्रतिवादी यस हानिका लागि उत्तरदायी छैन। यसै प्रकार कुनै एक दल द्वारा सामग्रीवाही जहाज दिए जानाले यिनकोर गरिनमा क्षतिका शमनका लागि जहाजका मालिकको गर्त्तव्य छ कि त्यो त्यस्तो अन्य कुनै पनि सुलभ जहाजको उपयोग गरेरे। यस सिद्धान्तको विश्लेषण जमाल बनाम मुल्ला, दाऊद ऐड कं. भएका मामलेमा भएको छ। एक समझौतेका अनुसार २३,५०० शेयरहरुका बेचने र ३० दिसम्बर, १९११सम्म त्यसलाई पठाईे जाने तथा भुगतान हुने कुरा तय भएको छ। शेयर सामान्यन्त्रित गरियो तर प्रतिवादीले तिनको डिलीवरी लिने अथवा पैसे चुकानाले हात खींच लिए अब यस्ता मामलहरूमा समझौतेभएका तथा बाजारका मूल्यहरुका बीच अन्तर नैं यसको पूर्तिको आधार हुनेछ। सम्झौता भंग भएका दिन शैयरहरूमा समझौतेभएका मूल्यदेखि १,०९,२१८ रु. कम मिलना चाहिन्छ थियो। तर २८ फरवरी, १९१२सम्म कुनै बिक्री भएको होइन। यस समय बाजार दर बढ रही थियो अत: शेयरहरु पर, समझौतेभएका दामदेखि केवल ७९,८६२ रु. कम मिले। प्रतिवादीको आग्रह थियो कि हामीलाई केवल ७९,८६२ रु.को नैं उत्तरदायी ठहराया जाए। परन्तु निश्चित भयो कि यस्तो क्षतिपूर्तिहरूको माप, सम्झौताभंग हुने दिनको बाजार दर र समझौतेको दरका बीचको निहित अन्तर हुनुपर्दछ। यहाँ बेचनेवाला आफ्नो क्षतिपूर्तिका लागि त्यसका भरपूर मूल्य लदिन सक्छ। यदि विक्रेता सम्झौता-भंग हुनको पछि पनि ती अंसहरूलाई राख्दछ भनें त्यो खरीदनेबाट, बाजार दर गिर जाने अवस्थामा, त कुनै प्रकारको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पाने अधिकारी हुनेछ र न बाजार दर बढ जाने अवस्थामा क्षतिपूर्तिको रकम घटा नैं सक्नेछ।
प्रतिवादी द्वारा देय क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन मुख्यत: न्यायालय नैं गर्दछ। मूल्यांकन न्यायालयका विचारधीन हुने अवस्थामा गरिएको कार्रवाई ‘अगृहीत क्षतिपूर्ति’का लागि भएको कहलाउँछ। परन्तु कहिले कहिले यी समझौतेभएका पक्ष क्षतिपूर्तिको रकमको माँग सम्झौता भंग गर्ने व्यक्तिहरुदेखि गर्दछन्। यदि त्यस तयको भएको रकमको अनुमान संभावित हानिका बिल्कुल बराबर हुनु ठीक मान लिइएको त त्यो अदा गरिएको क्षतिपूर्ति समझी जाएगी र पूर्ण रकम नैं दोषी पक्षलाई देनी हुनेछ। परन्तु यदि त्यो संभावित हानिका बराबर छैन सम्झिएको वरन्‌ यो मानिएको कि सम्झौता भंजकलाई दंड दिने अथवा यस प्रकारको गलतीको अत्यधिक भुगतानका लागि निश्चित गरिएको छ भनेंयसलाई जुर्मानेका बराबर समझा जायगा। न्यायालय यसबाट असहमति राख्दछ र केवल उन्ही क्षतिपूर्तिहरूलाई अनुमति दिन्छ जो वादीको वास्तविक हानिलाई पूर्ण गर्दै छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=क्षतिपूर्ति&oldid=906698" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३ सेप्टेम्बर २०२०, १६:४२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:४२, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।